Rarama Mapikicha anouya kuFaceTime yeMacOS Yakakwira Sierra | Ndinobva mac
Rarama Mapikicha anouya kuFaceTime yeMacOS Yakakwira Sierra
Ivo vakatozvitaura muWWDC yekupedzisira, ramangwana mashandiro esisitimu yeMac ichave imwe yeanogadzikana uye akasimba anoratidzwa kusvika nhasi. Izita rayo chete ndiro rakaita kuti tifunge zvavakazotaura mumharidzo, kuti macOS Sierra haina kufa uye kuti yaizovandudzwa zvakanyanya, ichiva iyo Yakakwira Sierra.
Ivo vakanatsa uye vakavandudza yazvino mashandiro sisitimu inosvika kune imwe vhezheni, iyo pamwe chete neiyo nyowani Hardware yakapihwa Ichaita catapult Apple makomputa kumusoro mukushandisa uye kugadzirwa.
Dhata dziri kutotanga kuoneka panhau idzo Apple isina kutaura nezvadzo zvakananga. Mune vhezheni nyowani macOS Yakakwira Sierra, iyo FaceTime application inosvika nenhau. Ngatirege kufunga kuti hurukuro pakati pevashandisi vakati wandei dzinosvika uye ndeyekuti Apple ichiripo haipe zviratidzo pachinhu ichocho. Mune ino kesi, izvo zvakaitwa ndeye mukana wekuve Raramai Mifananidzo paFaceTime.
Nenzira iyi, kana vaviri vashandisi vari muFaceTime hurukuro, ivo vanozokwanisa kutora mifananidzo mune imwecheteyo kutaurirana. ivo vachaponesa nguva pamberi pekufamba uye kurira kuri kutora nzvimbo muhurukuro, ndokuti, Rarama Mapikicha.
Ichokwadi nyaya kuti kune vamwe vanozoenda vasina kucherechedzwa, asi kune vamwe ichave kumberi yakakodzera kufunga nezvayo. Kuti ndikuudze chokwadi, ini handisi munhu mukuru wekuRarama Mifananidzo uye ini handiwanzoishandisa pane yangu iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Rarama Mapikicha anouya kuFaceTime yeMacOS Yakakwira Sierra
Maitiro ekugadzira nzira pfupi (alias) pane Mac
watchOS 4 inosvika nenhau dzakanaka, kunyorera kwakanyorwa pane Apple Watch